Isebenza njani -Shenzhen Sunson International Logistics Co., Ltd.
Ngala manyathelo akhawulezayo nelula, i-Sunsonexpress inokunceda ekupheliseni iintloko zakho zokufezekisa kwaye ikuncede ulinganise ishishini lakho. Ukukhawulezisa nangokuchanekileyo ukuzalisekiswa kwempahla yokugcina izinto ngexesha kunye nolwazi lokulandela umkhondo
INYATHELO 1- ISISOMBULULO ESENZIWAYO
Ukulungele ukukhupha ukuzaliseka kwakho? Nxibelelana ne-Sunsonexpress kunye nomphathi wophuhliso lweshishini oya kuthi abelwe inkxaso ngexesha lenkqubo yonke. Kumthengisi ngamnye, siza kuphonononga iimveliso zakho, iimfuno zoluhlu, ukuthengisa okujolise kuyo, kwaye siphendule nayiphi na imibuzo onokuba unayo. Emva koko siza kuhlalutya iimfuno zabo zeshishini kwaye sinikezele ngeyona mpumelelo kunye nesisombululo sokuhambisa.
INYATHELO 2- THUMELA ULUVO KWI-Sunsonexpress
Emva kokuba wenze iakhawunti yakho yasimahla yomsebenzisi, nceda wenze i-ASN (iSaziso sokuThumela esiPhambili) kunye nokuthumela uluhlu lweemveliso zakho kwiziko leSunsonexpress. Akukho zidingo zisezantsi zexabiso, thumela izinto ezininzi ngendlela othanda ngayo. Amashishini anokuthabatha ithuba ngexabiso lesaphulelo esithunyelwayo esivela kwi-Sunsonexpress.
Iqela lethu lifumana isitokhwe sakho, yenza iitshekhi ezineenkcukacha, uthathe iifoto okanye uqhube i-QC kwinkcazo yakho, emva koko uyifumanele ikhaya kwiziko lakho lokufezekisa iodolo, unokubeka iliso kwaye ulawule uluhlu lwakho lweziko ngeakhawunti.
Inyathelo 3-YENZA UMYALELO
Abathengi bafaka iiodolo kwiwebhusayithi yakho ye-ecommerce, kwaye ubangenise kwiqela le-Sunsonexpress nokuba kungoku-API, ukulayishwa kwebhetshi nge-CSV okanye ngokwenza ii-odolo ngesandla.
Ii-odolo zakho zifunyenwe zaza zaskrwa ngqo kwinkqubo yethu zisebenzisa inkqubo yolawulo lwendawo yokugcina indlu.
Inyathelo 4-KHETHA, PHAKATHI KUNYE NOKULANDELWA KWEENQanawa
Nje ukuba ungenise iiodolo kwiziko leakhawunti ngaphambi kwexesha lethu elimisiweyo, i-Sunsonexpress izinikele kwangolo suku lunye. Siza kukhetha kwaye sipakishe ngononophelo kwaye silungiselele ukuthunyelwa kwamanye amazwe ngokukhawuleza. Ngeli xesha uvumelekile ukuba ube nokubonakala okupheleleyo kunye nolawulo kwinkqubo yokufezekiswa kweziko leakhawunti.
Iqela lethu lokufezekisa ngobuchwephesha lithathe kwaye lipakishe iiodolo zakho ngononophelo kwaye longeze nakuphi na ukufakwa okanye izinto zokwazisa onqwenela ukuzenza.
Ukubonelela kwakho ngokubonakala kwayo yonke inkqubo kunye nokulandela umkhondo ukusuka kwindawo yokugcina izinto ukuya kuthi ga emnyango wabathengi bakho.
Inyathelo 5- UKUQWALASELA UKUFUMANA IPARCEL
Emva kweentsuku ezithile zothutho, abathengi bafumana iipasile. Asizalisekisi kuphela ukuhambisa ipasile yakho, kodwa sikwazisa ngokuoneliseka kwabathengi.
Ngaba ucinga ngokuthumela ngaphandle ukugcwaliseka kwe-eCommerce yakho e-China? Ngoku nceda unxibelelane nathi.